State Counsellor receives Japanese Minister for Foreign Affairs – MINISTRY of FOREIGN AFFAIR
State Counsellor receives Japanese Minister for Foreign Affairs
Daw Aung San Suu Kyi, State Counsellor of the Republic of the Union of Myanmar, received His Excellency Mr. Taro Kono, Minister for Foreign Affairs of Japan, at the Ministry of Foreign Affairs, Nay Pyi Taw at 10am on6August 2018.
During the meeting, Foreign Minister Mr. Taro Kono announced that Japan will donate water tanks and tents to the flood victims in Myanmar. He also expressed that Japan welcomes (1) the progress made by the Government of Myanmar in the implementations of the MOU signed between the Government of Myanmar and the United Nations Agencies on assistance to the repatriation process of the displaced persons from Rakhine State, (2) Myanmar Government’s efforts to bring peace, stability, development and to promote harmony and reconciliation among the various communities in Rakhine State, and (3) the establishment of an Independent Commission of Enquiry by the Government of Myanmar.
Moreover, he assured that Japan will provide necessary assistance in construction of housing for the displaced persons, construction of roads, schools and electrification in Rakhine State and continue to cooperate constructively with Myanmar Government in resolving the situation in Rakhine State and provide humanitarian assistance to the displaced persons.
နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်က ဂျပန်နိုင်ငံနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးအား လက်ခံတွေ့ဆုံခဲ့
(၆-၈-၂၀၁၈ ရက်၊ နေပြည်တော်)
နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်နှင့် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် ဂျပန်နိုင်ငံ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး H.E. Mr. Taro Kono အား ၆-၈-၂၀၁၈ ရက်၊ နံနက် ၁၀၀၀ အချိန်တွင် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၌ လက်ခံတွေ့ဆုံခဲ့ပါသည်။
ယင်းသို့ တွေ့ဆုံရာတွင် ဂျပန်နိုင်ငံမှ အကူအညီဖြင့် အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့် ရန်ကုန်မြို့ပတ်ရထားလမ်း အဆင့်မြှင့်တင်ရေးကိစ္စနှင့် ရန်ကုန်မြို့အတွင်း လျှပ်စစ် ဓာတ်အား အလုံအလောက် ရရှိရေးအတွက် ဆောင်ရွက်မည့် ကိစ္စရပ်များ၊ ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးနှင့် လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ရရှိရေးတို့အတွက် ဂျပန်နိုင်ငံမှ ပံ့ပိုးမှုဖြင့် ဆောင်ရွက်နေသည့် ကိစ္စများ၊ ရခိုင်ပြည်နယ်မှ တစ်ဖက်နိုင်ငံသို့ ထွက်ခွာသွားသူများအား ပြန်လည် လက်ခံရေးကိစ္စများနှင့် ပြန်လည် နေရာချထားရေးဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များကို အမြင်ချင်းဖလှယ် ဆွေးနွေးခဲ့ကြကြောင်း သိရှိရပါသည်။
တွေ့ဆုံပွဲသို့ မြန်မာနိုင်ငံဘက်မှ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးကျော်တင်၊ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန အမြဲတမ်းအတွင်းဝန် ဦးမြင့်သူနှင့် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနမှ တာဝန်ရှိသူများ၊ ဂျပန်နိုင်ငံဘက်မှ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဂျပန် သံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Ichiro Maruyama နှင့် ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ဝင်များ တက်ရောက် ခဲ့ကြပါသည်။
တွေ့ဆုံမှုအပြီးတွင် နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်နှင့် ဂျပန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတို့သည် ပူးတွဲ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတစ်ရပ် ပြုလုပ်ခဲ့ကြကြောင်း သိရှိရပါသည်။